Ellicott Dredges - Tombontsoa sy valisoa amin'ny mpiasa
Tombontsoa amin'ny mpiasa
Ny mpiasa sambatra sy voahosotra no lakilen'ny fahombiazan'ny orinasanay, ka manao izay azonay atao izahay mba hiasa ho an'ny fahafinaretana an'i Ellicott.
Te-hamolavola olona izahay, izay manentana ny tenany hanao bebe kokoa, ary hanampy ny mpiasa tsirairay amin'ny fanatanterahana ny tanjany amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny soatoavintsika.
Amin'ny maha mpiasa anao, raha manampy anay hanatanteraka ny iraka ampanaovina anao ianao ary manao izany amin'ny fomba marina, dia hanome valisoa anao izahay noho ny ezaka nataonao.
Ny fonosana tombony azontsika dia:
Ny karama fototra azo antoka
Ny fidirana amin'ny fitsaboana
Ny fidirana amin'ny fandaharam-pahasalamantsika
Dental sy vina
Mandoa vola fanao isan-taona
Safidy fampiasam-bola 401k
Manana ny fampandrosoana
Mino izahay fa ny fomba tsara indrindra hanampiana ny olona hiroborobo dia amin'ny alàlan'ny fikatsahana asa manokana sy ny fiofanana amin'ny fomba tsy ofisialy. Izahay dia manome izany amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny mpanazatra, fampianarana, ary fiofanana amin'ny fomba ofisialy.
Ny fifandraisana amin'ny manager, mentors ary coach dia mitana andraikitra lehibe ihany koa. Noho izany, ataonay antoka fa be ny fotoana azo atao amin'ny resadresaka misokatra amin'ireo mpiasa afaka manampy amin'ny famolavolana ny asanao.
Tapaka ny lalan-telefaoninay
Miaina fahatapahana an-tariby izahay izao. Ireo mpanjifa izay mila fanampiana avy hatrany dia andefaso mailaka miaraka amin'ny takiana amin'ny Sales to sales@dredge.com na ho an'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa sy ireo fitaovana hiarovana ny parts@dredge.com. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana ary manantena ny hiresaka aminao tsy ho ela.